धरहरा पुननिर्माणमा किचलो, महानगरमाथि ४० करोडको मुद्दा ! – Nepal's No. 1 Digital Newspaper
धरहरा पुननिर्माणमा किचलो, महानगरमाथि ४० करोडको मुद्दा !
By Digital Khabar Last updated Nov 3, 2019 8 0
१७ कात्तिक, काठमाडौं । भूकम्पले भत्काएको धरहरा पुनर्निमाणको काम सुरु भएको डेढ वर्षभन्दा बढी भयो । सिसाभित्रको आकर्षक टावरको रुपमा धरहरालाई फेरि उभ्याउने काममा सुस्त गतिमा भइरहँदा काठमाडौं महानगरपालिका मुद्दाको किचलोमा फसेको छ ।
धरहरा ढल्नुअघि त्यसको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनीले महानगरविरुद्ध ४० करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दावी गर्दै मुद्दा हालेको छ । धरहराको व्यवसायिक प्रयोजनका लागि काठमाडौं महानगरपालिका र साइड वाकर्सबीच ०६१ सालमा सम्झौता भएको थियो । सम्झौता पत्रअनुसार म्याद अझै ६ वर्ष बाँकी छ ।
तर, धरहरा ढलेपछि महानगरपालिकाले एकतर्फी रुपमा सम्झौता रद्द गर्‍यो । त्यसबाट आफूलाई हानी भएको भन्दै अहिले ठेकेदार कम्पनीले ४० करोड क्षतिपूर्ति दावी गरेर मुद्दा हालेको मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले बताएका छन् ।
‘धरहरामा हिजो जोसँग सम्झौता गरेर काम गरेका थियौं, उसले ४० करोडको मागदावी गरेको छ । अदालतबाटै पत्र आएको छ,’ अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा मेयर शाक्यले भने ।
धरहरा ढेलेपछि पनि त्यसआसपास सटरहरु भाडमा लगाएर यो कम्पनीले कमाई गरिरहेको थियो । धरहरा ढलेपछि कसले पुनर्निमाण गर्ने भन्ने विषयमा बहस हुँदा यो कम्पनी छलफलमा आएन । तर, जब सरकारले नेपाल टेलिकमलाई यसको जिम्मा दियो, त्यसपछि कम्पनीले महानगरमा निवेदन हाल्दै धरहरा आफूले बनाउन पाउनुपर्ने दावी पेश गर्‍‍यो ।
त्यतिबेला, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘मेरो धरहरा, म बनाउँछु’ अभियान घोषणा गरेर सर्वसाधारणसँग सहयोगको लागि अपील गरेका थिए । धरहरा कसले कसरी बनाउने भन्ने विवाद साम्य हुन नसकेपछि नेपाल टेलिकमले पुनर्निर्माणबाट हात झिक्यो । धरहरा निर्माणमा अवरोध हुने देखेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनअनुसार महानगरपालिकाले एकतर्फी रुपमा साइड वाकर्ससितको सम्झौता भंग गर्‍यो र डोजर लगाएर धरहरा वरपरको सटरहरु भत्कायो ।
त्यसपछि साइड वार्कसले महानगरबाट अन्यायमा परेको र आफूलाई आर्थिक क्षति पुगेको भन्दै अदालत गुहारेको हो ।
सुम्पिएका थिए स्थापितले
०५५ साल कात्तिक १ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाल सरकार अन्तर्गत रहेको धरहरा ५० वर्षका लागि महानगरपालिकालाई जिम्मा लगाएको थियो । तर तत्कालीन मेयर केशव स्थापितले भने महानगरपालिकाको स्वामित्वमा आउनु पाँच महिनाअगावै साइड वाकर्सलाई धरहरा सञ्चालनको जिम्मा दिइसकेका थिए ।
स्वामित्वमा आउनुअगावै सुम्पेको भनेर टेबहालका गौतम डंगोलले अदालतमा मुद्दा दिएपछि तत्कालीन सर्वाेच्च अदालतले स्थापितको निर्णय उल्टाइदिएको थियो । तर, ०५५ सालको निर्णय उल्टिए पनि ०६१ साल वैशाख ३१ गते साइड वकर्स र काठमाडौ महानगरपालिकाबीच अर्को सम्झौता भयो । यसपटक पनि महानगरपालिकाले बिनाटेन्डर धरहरा साइड वाकर्स प्रालिलाई सुम्पिएको थियो ।
मासिक लाखौंको आम्दानी हुने धरहरा क्षेत्रलाई मासिक ६० हजार रुपैयाँ लिने गरी जिम्मा लगाइएको थियो । ०६१ वैशाख ३१ गते भएको सम्झौतामा साइड वाकर्सले २० वर्षका लागि जिम्मा लिएको उल्लेख छ ।
डंगोलले फेरि ०६२ सालमा कम रकममा नै धरहरा जिम्मा लगाएको भनेर सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरे । ०६७ साल फागुन ४ गते पुनरावलोकन गर्नु भन्दै सर्वोच्चले फैसला सुनायो ।
उक्त फैसलापछि ०६८, माघ २२ गते महानगरपालिका र साइड वाकर्स प्रालिवीच अर्को सम्झौता गरिएको थियो । उक्त सम्झौतामा धरहरा क्षेत्र लिजमा लिएवापत साइड वाकर्स प्रालिले महानगरपालिकालाई मासिक दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै यस्तो रकम ३ महिनाअगावै बुझाउनुपर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख गरियो ।
साइड वाकर्सका सञ्चालक सिद्धबहादुर गुरुङ हुन् । उनले १३ वर्षसम्म धरहराको रेखदेख गरेको र धरहराको मर्मतसहित व्यस्थापनको जिम्मा अझै पनि आफ्नै भएको दावी गर्दै आएका छन् ।
तर, साइड वाकर्सलाई यसको पुनर्निर्माण गर्न लगाउने समयमा महानगरपालिकाले कुनै चर्चा नै गरेन । साइड वाकर्सले भने आफूहरुले चलाउन पाउने हो भने पुनर्निर्माण गर्न तयार रहेको बताउँदै आएको थियो ।
तर, सरकारले आफ्नै स्रोत प्रयोग गरी पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत धरहराजस्तै टावर बनाउन थालेपछि सम्झौता पालना नहुँदा आफूलाई आफूलाई आर्थिक हानी भएको भन्दै साइड वार्कस उच्च अदालत पाटन गएको थियो । अदालतले सो मुद्दालाई मध्यस्थता समितिमा पठाएको छ । महानगरसहित ठेकेदार पक्ष दुई पूर्व न्यायधिश, वकिल र दुबै पक्षले नियुक्त गरेको एक जना मध्यस्थकर्ता व्यक्तिसहित बन्ने समितिमा अब साइड वाकर्सको माग दावी पेश हुनेछ ।
९० दिनभित्र साइड वाकर्सले पेश गर्ने मागदावीमाथि मध्यस्थता समितिले निर्णय लिने महानगरका सूचना अधिकृत बसन्त आचार्यले जानकारी दिए । ‘मध्यस्थता समितिमा अझै ठेकेदार पक्षले दावी पेश गरिसकेको छैन, उसले दावी पेश गरेमा त्यसमाथि समितिले लिने निर्णयअनुसार यो विवाद टुंगिन्छ ,’ आचार्यले भने ।
सिन्धुपाल्चोक बस दुर्घटना अपडेटः ४ जनाको मृत्यु, १५ जनाको उद्दार